Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas oo qaabilay Madaxa QM ee dhanka Ammaanka iyo Badbaadinta[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas oo qaabilay Madaxa QM ee dhanka Ammaanka iyo Badbaadinta[Sawirro]
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 11-6-2015 aqalka madaxtooyada dawladda Puntland ee Garoowe ku qaabilay madaxa howlgalada Qaramada Midoobay ee amniga iyo badbaadinta UNDSS Mr.Nick Loven Teen fadhigiisuna yahay xarunta qaramada midoobay ee New York iyo wefdi uu hogaaminayey.
Ugu horeyn madaxweynaha ayaa warbixin ka siiyey Mr.Nick Loven amaanka iyo horumarka baaxada leh ee kajira Puntland, islamarkaana tilmaamay in maalinba maalinta ka dambaysa ay Puntland ku taalabsanayso horumar dhinac kasta ah oo la taaban karo.
Mr.Nick Loven Teen ayaa dhankiisa Puntland ku amaanay horumarka ay gaartay , waxaana uu intaa raaciyey in Qaramada midoobay ay marwalba garab taagan tahay Puntland kana taageerayso dhinac walba si loo amba-qaado wadada toosan.
Wada shaqeynta dhanka amaanka iyo ladagaalanka urur diimeedka Al-shabaab ee awoodoodu hada sii yaraanayso ayuu balan-qaaday in Puntland ay kaa teegarayaan Mr.Nick Loven , maadama ay Puntland si adag ula dagaalantay kooxdaasi dhabar jab xooglehna u geysatay.
Ugu dambeyn shirkaan oo looga wada hadlay arimo dhowr ah oo muhiim ah ayaa ku soo idlaaday jewi wanaagsan, waxaana loo balamay fulinta qodobada laysla meeldhigay iyo sii wadida taageerada Qarmada Midoobay ee Puntland.